1 Piera 3 - Ny Baiboly
1 Piera toko 3
Ny adidin'ny mpivady - Ny fifankatiavana sy fifanaovan-tsoa - Ny fandeferana ny fanenjehana tahaka ny Kristy.
1Toy izany koa hianareo vehivavy, maneke ny vadinareo, ka raha misy ny sasany tsy mino ny Evanjely, dia mba ho voataonan'ny fitondran-tenan'ny vadiny na dia tsy amin'ny fitorian-teny aza, 2rahefa mahita ny fitondran-tenanareo madio sy feno fahatahorana. 3Aoka ny firavakareo tsy ho zavatsoa ivelany fotsiny, toy ny randram-bolo kanto, na ny firava-bolamena amana didy akanjo ara-pomba, 4fa ny olona ao anaty tsy miseho no ravaho halemem-panahy tsy miovaova sy fiadanana: izany no tena zavatra eo imason'Andriamanitra. 5Fa toy izao no firavaky ny vehivavy masina fahiny izay nanantena an'Andriamanitra sy nanaiky ny vadiny; 6tahaka an'i Sarà izay nanaiky an'i Abrahama sy nanao azy ho tompony; ary zanany hianareo, raha manao soa tsy aman-tahotra na inona na inona fampitahorana anareo.
7Hianareo lehilahy kosa, mahaiza mitondra ny vadinareo amim-pahendrena, toy ny fanao amin'ny fanaka malemy; ento amim-panajana izy, fa mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana hianareo, mba tsy hisy hanampontsapona ny fivavahanareo.
8Farany, miraisa saina hianareo rehetra, miombòna alahelo, mifankatiava toy ny mpirahalahy, mifamindrà fo, manetre tena. 9Aza mamaly ratsy ny ratsy, na mamaly ompa ny ompa, fa aleo aza misaotra; satria ho amin'izany no niantsoana anareo, mba hahatonga anareo ho mpandova ny fitahiana. 10Fa izay te-ho tia ny fiainana sy hahita andro tsara, dia aoka hiaro ny lelany amin'ny ratsy, sy ny molony tsy hiteny fitaka; 11aoka hiala amin'ny ratsy izy ka hanao soa, ary hitady fihavanana sy hanaraka azy. 12Fa eo amin'ny olo-marina ny mason'ny Tompo, ary ho amin'ny fitarainany ny sofiny; fa eo amin'ny mpanao ratsy kosa ny tavan'ny Tompo.
13Ary iza no hahavita ratsy aminareo, raha mikely aina hanao soa hianareo? 14Fa na ampahorina noho ny fahamarinana aza hianareo, dia vao mainka sambatra, ka aza matahotra izay fandrahonany, na mihorohoro amin'izany akory. 15Ny Kristy Tompo no ankamasino ao am-ponareo. Aoka ho vonona mandrakariva hianareo hamaly amin-kamoram-po sy fanajana an'izay rehetra manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana izay ao anatinareo. 16Aoka ho tsara ny hitsim-ponareo, mba ho amin'izay anendrikendrehana anareo indrindra no hampahamenatra an'ireo mpanaratsy ny fitondran-tena tsara ataonareo ao amin'ny Kristy. 17Fa aleo amin'ny fanaovan-tsoa no miaritra fahoriana, raha izany no sitra-pon'Andriamanitra, toy izay amin'ny fanaovan-dratsy.
18Na ny Kristy koa aza, niaritra fahafatesana indray mandeha noho ny otantsika, dia izy marina ho an'ny tsy marina, mba hanolorany antsika amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo izy, fa novelomina tamin'ny fanahy. 19Ary tamin'io fanahy io ihany koa no nandehanany nitory teny tamin'ireo fanahy tao an-tranomaizina, 20dia ireo fanahy tsy nino fahiny, fony niandry ny fahari-pon'Andriamanitra tamin'ny andron'i Noe, mandritra ny nandrafetana ny sambo fiara, izay nampidirana olona vitsy, dia valo monja, sy namonjena azy ireo tamin'ny rano. 21Ary amin'ny rano ihany koa ankehitriny, dia amin'ny batemy izay tenan'io tandindona io, sy tsy fanadiovana ny loton'ny vatana, fa fangatahana fo tsara amin'Andriamanitra, no amonjena anareo noho ny nitsanganan'i Jesoa-Kristy tamin'ny maty, 22dia ilay nandevona ny fahafatesana mba hahatonga antsika ho mpandova ny fiainana mandrakizay, ary efa lasa any an-danitra, mipetraka eo an-kavanan'Andriamanitra, eken'ny Anjely sy ny fahefana ary ny hery. >